Nagarik News - खोरमा गुन्डा
राजधानी त्रासको जंगल भएको छ। किनभने, यहाँ चरी, बाघे र स्यालजस्ता गुन्डा–जीवहरू छन्। नागरिकका सुरक्षा, जिउधन र अमनचैन कुनै पनि बेला उनीहरूको शिकारमा पर्नसक्छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले गुन्डा पालिरहेका छन्, पोसिरहेका छन्। उसो त अहिले गुन्डालाई खोरमा हाल्ने अभियान जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। गुन्डा जमात भयभीत पनि छ। एसएसपी रमेशप्रसाद खरेल र गृहमन्त्री वामदेव गौतम गुन्डामुक्त समाज बनाउने भन्दै गर्जिन त गर्जिरहेका छन्, तर कानुनको अभावमा समात्न नपाई गुन्डाहरू तीन हजार धरौटी राखेर सजिलै छुटिरहेका छन्। गोपाल दाहालले यो गुन्डा–पुलिस लुकामारीलाई नजिकबाट नियाल्ने प्रयत्न गरेका छन्।
फागुन १३ गते दशरथ रंगशालामा फुटबल हेर्दाहेर्दै पक्राउ परेका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ यसअघि १० पटक प्रहरी हिरासतमा पुगिसकेका नामुद गुन्डा हुन्। भारतमा जन्मिएका र उतै हुर्किएका मनाङे नेपाल आएपछि ठमेल क्षेत्रमा हल्लिने क्रममा बिस्तारै अपराधको दुनियाँमा प्रवेश गरेका थिए। पर्यटकको बाक्लो आउजाउ हुने ठमेलमा डिस्को खोलेर व्यापारमा प्रवेश गरेलगत्तै उनी आपराधिक गतिविधिमा पनि संलग्न हुन थाले। केटाहरू भेला पारेर ‘लिडर' बन्ने सोखले उनी ‘ग्याङस्टर' बन्दै गए। उनले अपराधको दुनियाँमा राजीव गुरुङबाट आफूलाई दीपक मनाङेका रूपमा स्थापित गराए। उपत्यकाभित्र विभिन्न व्यापारी, हाउजिङ कम्पनी सञ्चालक, ठेकेदार तथा विभिन्न व्यवसायीबाट जबर्जस्ती रकम माग गर्ने, असुल गर्ने र माग गरेको रकम नपाएको खण्डमा परिवारसमेतलाई अपहरण गर्ने र ज्यानसमेत लिनेजस्ता धाकधम्की दिने गरेको आरोपमा उनी अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीसँग प्रहरीको लुकामारी चल्न थालेको १० वर्ष बितिसकेको छ। व्यवसायीलाई तर्साएर पैसा उठाएको आरोपमा गत भदौमा पनि उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो। त्यतिबेला उनी करिब एक महिनामै छुटेका थिए। पहिलोपटक २०६० मा पक्राउ परेका मनाङे त्यसपछि विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक पक्राउ परिसकेका छन्। प्रहरीले जति पटक प्रक्राउ गरे पनि न उनले अपराध गर्न छोडेका छन्, न त प्रहरीले उनलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नै गर्न सकेको छ।
एसएसपी रमेशप्रसाद खरेल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रमुख भएपछि उनले गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्ने अभियान नै चलाएका छन्। यस क्रममा फागुन २६ गतेसम्ममा काठमाडौँ प्रहरीले गुन्डागर्दीमा संलग्न भनिएका ८९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। माघ २३ गते एसएसपी खरेललाई उनकै कार्यकक्षमा भेट्न पुगेका गुन्डा बलराम सापकोटा (बले) लाई पक्राउ गरेर सुरु भएको यो अभियान अहिले पनि जारी छ। ‘क्यासिनो किङ'का रूपमा परिचित बले प्रहरीलाई आर्थिक प्रभावमा पारी क्यासिनोबाट करोडौँ कमाउन सफल भएका व्यक्ति हुन्। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सीआईबीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, बले अहिले प्रहरी हिरासतमा छैनन्। पक्राउ परेको २६ दिनमा उनी तीन हजार रुपैयाँ धरौटीमा फागुन १९ गते छुटिसकेका छन्। बलेजस्तै फागुन २६ गतेसम्ममा पक्राउ परेकामध्ये ४२ जना छुटिसकेका छन्। प्रायः सबै तीन हजार धरौटी बुझाउँदै छुटेका छन्। पक्राउ परेकामध्ये अधिकांशलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो। यो ऐनअनुसार अधिकतम २४ दिनसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ।
प्रहरीले अहिले पक्राउ गरिरहेका अधिकांश गुन्डा पटके हुन्। हनुमानढोकामा उनीहरूको आवतजावत वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। पक्राउ परेकामध्ये थोरैमात्र पहिलो पटक प्रहरीको खोरमा पुगेका छन्।
खोइ त कानुन ?
प्रहरीले जति पटक नियन्त्रणमा लिए पनि प्रभावकारी कानुनको अभावमा गुन्डाहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता गणेश केसी गुन्डागर्दीविरुद्धको कानुनी कारबाही देशभर सञ्चालन भइरहेको बताउँछन्। प्रहरीको यो अभियानलाई गृह मन्त्रालयले पनि ‘ओन' गरेका कारण कारबाही सहज भएको उनको बुझाइ छ। तर, प्रभावकारी कानुनको अभावमा प्रहरीले पछिल्लो पटक सञ्चालन गरेको अभियान पनि गुन्डागर्दी नियन्त्रणको ‘स्टन्ट'मा परिणत हुने खतरा पनि उत्तिकै छ।
‘प्रहरीको कामलाई जनताले प्रशंसा गरेका छन्,' प्रवक्ता केसीले भने, ‘समाजमा भयरहित वातावरण बनाउन र शान्ति–सुरक्षा कायम गराउन गलत काम गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व प्रहरीको हो।' तर, गुन्डागर्दी नियन्त्रण कानुनको अभावमा प्रहरीको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। केहीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक, संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि पक्राउ परेका अधिकांशलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत कारबाही अघि बढाउँदा छिट्टै छुट्ने गरेको प्रवक्ता केसीले बताए। ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले गुन्डागर्दी नियन्त्रण कानुनको मस्यौदा तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि कानुन पास नहुँदा गुन्डागर्दी नियन्त्रणमा प्रहरीको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन,' प्रवक्ता केसीले भने। प्रस्तावित कानुनमा गुन्डागर्दीबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गरिने, लामो समय थुनामा राख्न सकिने, आर्थिक सजायको मात्रा बढाउनुपर्नेलगायत प्रस्ताव छन्।
महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाका प्रवक्ता डीएसपी अर्जुन चन्द गुन्डागर्दीमा संलग्नहरूलाई अपूरा कानुनका कारण कडा कारबाही गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘पटक–पटक पक्राउ पर्दा पनि सजिलै छुट्नुको कारण गुन्डा नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन नभएकाले नै हो,' प्रवक्ता चन्दले भने, ‘पर्याप्त प्रमाण नपुगेपछि सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत २४ दिन थुनामा राखेर छोड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।'
समाजमा बदनाम गुन्डाहरू पार्टीको नेता, समाजसेवी, व्यापारीको भेष धारणा गर्ने क्रम बढेकाले गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्ने काम कठिन हुँदै गएको चन्दले बताए। ‘एक जनाले विभिन्न ठाउँमा केटाहरू परिचालन गरेर गलत धन्दा गरिरहेका हुन्छन्,' उनले भने, ‘सबैको बाहिरी आवरण पेसा–व्यवसाय गर्ने व्यक्तिका रूपमा हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई पक्रेर गुन्डागिरी गरेको प्रमाण जुटाउन मुस्किल हुन्छ।' प्रहरीको यस्ता अभियानले समाजमा गलत काम गरिरहेकाहरूको मनोबल गिर्ने उनको दाबी छ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइराला गुन्डागर्दी नियन्त्रणमा प्रहरीको कामलाई मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग र समर्थन गरिएको बताउँछन्। ‘गुन्डागर्दी नियन्त्रणका लागि मस्यौदा गरिएको कानुन पास गराउने सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले भने।
फागुन १३ गते गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पदभार ग्रहण गर्दै कर्मचारी तथा प्रहरीलाई दिएको पाँचबुँदे निर्देशनको पहिलो बुँदामा थियो– गुन्डागर्दी नियन्त्रण। प्रहरीलाई उनले काठमाडौँ उपत्यका तथा देशभर गुन्डागर्दी गरिरहेकाहरूलाई ‘कर्‍यापझ्याप' पार्न कडा निर्देशन दिएका थिए। गृहमन्त्रीको निर्देशन पाएपछि प्रहरीले अहिले गुन्डागर्दी र दादागिरी गर्नेहरूलाई देशव्यापी रूपमा पक्राउ गर्ने बृहत् अभियान नै चलाएको छ। तर, गुन्डागर्दीविरुद्धको यो अभियानमा सबैभन्दा बढी तगारा लगाउने काम पनि राजनीतिक दल तथा तिनका नेताबाट हुँदै आएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। बलराम सापकोटा ‘बले' लाई छुटाउन प्रधानमन्त्रीका पीएले दबाब दिएका थिए। महाराजगञ्ज क्षेत्रमा गुन्डागर्दी गर्दै आएका तेजेन्द्र (गुन्डा चक्रे मिलनका भाइ) लाई छुटाउन उपप्रधान एवम् स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रहरीलाई दबाब दिएका थिए। सभासद् जगदीश्वरनरसिंह केसी पनि उनलाई छुटाउन लागिपरेका थिए। बले र तेजेन्द्र राजनीतिक दलसँग जोडिएका साना स्तरका गुन्डा हुन्। उनीहरूको तुलनामा निकै प्रभावशाली गुन्डा अहिले पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका छैनन्। आइहाले पनि प्रहरीले उनीहरूलाई २४ दिन पनि थुनामा राख्न नसक्ने अवस्था छ।
कहिले समातिन्छन् यी?
काभ्रेली समूहका ‘नाइके' गणेश लामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य छन्। रात्रिकालीन व्यवसाय, रक्तचन्दन तस्करी हुँदै निर्माण व्यवसायीको आवरणमा पुगेका उनी राजनीतिक संरक्षण खोज्दै २०६७ पुस २० मा सहयोगीसहित केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा फोरम लोकतान्त्रिकमा प्रवेश गरेका थिए। संविधानसभा निर्वाचनमा वारेसनामामार्फत जेलबाटै काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट फोरम लोकतान्त्रिकको उम्मेदवारी दर्ता गराएका लामा अहिले भुटानमा बसिरहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीसँग २७ करोड १ लाख ६१ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको र सोको स्रोत नखुलेकाले मुद्दा चलाएको थियो। संविधानसभामा निर्वाचित भएको भए उनी यतिबेला संविधान बनाउने भाषण गरिरहेका हुन्थे होलान्। तर, निर्वाचनमा पराजय भएपछि पक्राउ पर्ने डरले उनी भुटान पलायन भएका छन्।
दिनेश अधिकारी (चरी)
जबर्जस्ती रकम असुली गर्दै अपराधमा प्रवेश गरेका धादिङका चरी धादिङ एमाले क्षेत्र नम्बर १ का उपाध्यक्ष हुन्। आपराधिक उडानमा चरीले पनि निकै लामो बेग मारिसकेको भए पनि राजनीतिक संरक्षण पाएका कारण उनीमाथि कारबाही भएको छैन। गत माघ ६ गते ललितपुर कांग्रेसका महासमिति सदस्य मीनकृष्ण महर्जनलाई ठेक्काको कमिसन बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि चरी र अर्का गुन्डा रमेश बाहुन (सुजन पौडेल) ले गोली हानेका थिए। केही समयअघि नुवाकोटबाट काठमाडौँ फर्कंदै गर्दा थानकोटमा प्रहरीले चरीसहित उनको समूहलाई २० लाखभन्दा बढीको चेक र हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो। चेक निर्माण व्यवसायीसँग असुलेको प्रहरीको दाबी थियो। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उनलाई धरौटीमा छोडेको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चरीलाई खाग तस्करीको अभियोगमा पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जमा बुझाएको थियो। तर, खाग नक्कली भन्दै उनी मुक्त भएका थिए। राधे भण्डारीलाई खुकुरी हानेर हत्या प्रयास गरेको अभियोगमा अहिले प्रहरी उनको खोजीमा छ। तर, उनी अहिले देशबाहिर पुगिसकेका छन्।
रमेश बाहुन (सुजन पौडेल)
हातहतियार तथा खरखजाना र जबर्जस्ती रकम असुलीको अभियोगमा प्रहरीले खोजिरहेको सुजन पौडेल एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता हुन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले रामेछाप र झापामा पार्टीको चुनावी अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। नेपाली सेनाको रेन्जर गणको जागिर छाडेका रमेशले साना हतियारको कारोबारबाट आपराधिक यात्रा थालेका हुन्। प्रहरी रेकर्डअनुसार उनी २०६२ बाट अपराध दुनियाँमा छिरेका थिए। उनी २०६४ वैशाखमा दरबारमार्गबाट पेस्तोलसहित पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका उनी बुटवलबाट पुनः दुई पेस्तोलसहित पक्राउ परेर हातहतियार तथा खरखजानाको अभियोगमा दुई वर्ष कारागार बसेका थिए।
हतियार अभियोगमा सफाइ पाएर जेल मुक्त भएपछि उनी सेनाको भगौडा र रामेछापका केही युवा समेटेर रकम असुलीमा सक्रिय भएका थिए। उनीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा हातहतियार तथा खरखजानाकै अभियोगमा मुद्दा छ भने काठमाडौँ परिसरमा जबर्जस्ती रकम असुलीको जाहेरी र कालीमाटी वृत्तमा हातहतियार अभियोग छ। निर्वाचनमा खुलेआम प्रचारप्रसारमा हिँड्दा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेन। गुन्डागर्दी नियन्त्रण अभियान चलाएपछि प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको बताएको छ।
एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघका केन्द्रीय सदस्य र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय इन्चार्ज हुन्, पर्शुराम बस्नेत। पन्ध्र वर्षदेखि विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर पूर्वमा ठेकेदार, ट्याक्सी, रेस्टुरेन्ट, जग्गा प्लटिङ गर्नेहरूसँग कमिसन उठाउने गरेका पर्शुरामका सहयोगीले पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई कुटेपछि ‘डन'का रूपमा चर्चामा आएका हुन्।
दोलखाबाट २० वर्षअघि यातायात मजदुर बनेर विराटनगर आएका उनको वास्तविक नाम कृष्ण बस्नेत हो। कमजोर आर्थिक अवस्थाका उनले छोटो समयमै करोडौँको सम्पत्ति कमाएपछि उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले पक्राउ गर्‍यो। धरौटीमा छुटेका उनको विराटनगरको नेपाल बजार, भेडेटारको प्लटिङ र हिलेको जग्गामा लगानी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा परेपछि उनले साथीहरूका नाममा जग्गा किन्ने र विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने गरेका छन्। सुरुका दिनमा आफैँ झगडामा उत्रिने उनी पछिल्लो समय भलाद्मी र नम्र बनेका छन्।
ठेक्कापट्टाका पार्टनर अभिषेक गिरीसँग दुश्मनी बढेपछि उनीमाथि २०६४ भदौ ३ गते दाहिने पाखुरामा गोली प्रहार भएको थियो भने २०६६ फागुन २७ मा पनि उनीमाथि आक्रमण भएको थियो। एमालेमा केपी ओली र महेश बस्नेतको छत्रछायामा रहेका उनी कारबाहीमा परेका छैनन्।
कांग्रेस कार्यकर्ता भनेर चिनिने विराटनगरका अभिषेक गिरी पहिला पर्शुराम बस्नेत, उमेश यादवका पार्टनर थिए। २०६४ सालपछि मधेसी जनअधिकार फोरमसँग मिलेर काम गरेका उनी करण यादवको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परे। पार्टनरसिपमा धन्दा गरेर कमाएको ८६ लाख रुपैयाँ लिएर भागेपछि पर्शुरामसँग उनको दुश्मनी बढेको थियो।
आफैँ झगडामा संलग्न हुने, रेस्टुरेन्टमा गएर केटी उठाउने, चोरी गर्ने जस्ता हर्कत गर्ने गिरी पछिल्लो समय ठेक्का रोक्ने, समूह बनाएर युवा परिचालन गर्ने काममा संलग्न थिए। ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेर छुटेका उनलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा छ। छोटो समयमै अकुत सम्पत्ति कमाउनेमा पर्ने अभिषेक अहिले प्रहरी सक्रियता बढेपछि पहिलाजस्तो सक्रिय छैनन्।
मीनकृष्णको राजनीतिक ‘प्रोफाइल' पल्टाउने हो भने उनी नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन्। तर, राजनीतिक पाटोले मात्र उनको पूरै परिचय दिँदैन। ललितपुरका स्थायीवासी महर्जनको गुन्डागर्दीको राज धेरैले देखेभोगेका छन्। जिल्लाभित्र लाग्ने जुनसुकै ठेक्कापट्टामा उनका लागि ठूलो भाग छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ। सडक कार्यालय ललितपुरले गरेको ३१ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा आएको कमिसनको भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि उनलाई अरू दुई गुन्डा चरी र रमेश बाहुनले माघ ६ गते गोली हानेका थिए। यो घटनाबाट मीनकृष्ण शुद्ध कांग्रेसका कार्यकतामात्र होइनन् भन्ने थप प्रस्ट भएको छ। तर, कांग्रेसका नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूको संरक्षण पाएका उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छैनन्। प्रहरीले उनलाई पक्रने आँट गरेको छैन। ललितपुरको ठेक्कापट्टामा महर्जनको एकाधिकार रहेको छ। चक्रपथ सुधार अभियान चलिरहेको र त्यसका लागि चाहिने ढुुंगा तथा गिट्टीका लागि ललितपुरको दक्षिणी भेगमा बन्द रहेका ढुंगाखानी खुलाउन उनले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको उपयोग गरिरहेका छन्। खुल्लमखुल्ला ठेक्कापट्टाबाट रकम असुली रहे पनि उनी कानुनी कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्।
कुमार श्रेष्ठ (घैँटे)
सामाखुसीका कुमार श्रेष्ठ उर्फ घैँटे कांग्रेसनिकट गुन्डा हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी र उनका भाइ जगदीश्वरनरसिंह केसीका दाहिने हात मानिने घैँटे संविधानसभा निर्वाचनमा दाइ केसीको प्रचारप्रसारमा खटिएका थिए। विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न घैँटेलाई नुवाकोट जिल्लाका कांग्रेस सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीको संरक्षण छ। प्रहरीबाट जोगिनका लागि उनले पटक–पटक केसीको घरमा संरक्षण लिने गरेको प्रहरी बताउँछ। प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाउँदा उनी जगदीश्वरनरसिंहको साथ लागेर प्रहरी कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। पक्राउ पर्ने डरले घैँटेले पनि अहिले देश छोडिसकेका छन्।
ठूलो सगुन र सानो सगुन
भक्तपुरमा संगठित आपराधिक समूह चलाइरहेका सगुन श्रेष्ठ उर्फ ठूलो सगुन र बमबहादुर श्रेष्ठ उर्फ सानो सगुन कांग्रेसका कार्यकता हुन्। २०६८ मंसिर २१ गते सिन्धुपाल्चोकको जलबिरेेमा आयोजित जागरण सभामा उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। सिन्धुपाल्चोक हगाम गाविसका उनीहरू यस अगाडि माओवादीमा थिए। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनअगाडि यी दुवै माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि ठूलो सगुन अपहरणको अभियोगमा पक्राउ परे। जेल मुक्त भएपछि ‘माओवादीले षड्यन्त्र गरेको' भन्दै उनी कांग्रेसतिर लागे। कांग्रेसमा लागेपछि उनी निर्माण व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकको उपाध्यक्षमा निर्विरोध चुनिएका थिए। उनी अहिले पनि भक्तपुरलाई ‘बेस' बनाएर आपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। तर, पक्राउ परेका छैनन्।
गुन्डा चक्रे मिलनका भाइ हुन्, तेजेन्द्र गुरुङ। चक्रे जेल परेपछि दाइको गुन्डागर्दीको बिँडो थामिरहेका उनी माघ २२ गते पक्राउ परेका थिए। विगतमा लुटपाट र गुन्डागर्दी गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्रेको थियो। तेजेन्द्रलाई छुटाउन कांग्रेस तथा एमालेका प्रभावशाली नेताले प्रहरीलाई निरन्तर दबाब दिएका थिए। कांग्रेसका सभासद् जगदीश्वरनरसिंह केसी र उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रहरी दिनहुँ फोन गरेर तेजेन्द्रलाई छुटाउ सफल भएका थिए। महाराजगञ्ज क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनी तथा क्यासिनोबाट रकम असुल्ने गरेका छन् उनले।
एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघका धरान नगर इन्चार्ज दिवस राई सात वर्षअघि धरानमा हुने कट्टी हानाहान, झगडामा संलग्न हुने गर्थे। सामान्य आर्थिक हैसियतका उनी छोटो समयमै ठेक्कापट्टा रोक्ने र कमिसन माग्ने खेलमा संलग्न भए। सुरमा अरू ठेकेदारबाट परिचालित हुने उनी पछिल्लो समय आफैँ ठेकेदार बने।
चार वर्षअघि धनकुटामा ठेकेदार अपहरण गरेपछि चेकसहित पक्राउ परेका उनलाई एमालेले शक्ति लगाएर छुटाएको थियो। छुटेलगत्तै उनलाई फूलमाला र अबिर जात्रा गर्दै एमालेले नगरपरिक्रमा गराएपछि उनी झन् सक्रिय बने। एमाले स्थानीय नेताको संरक्षण पाएका उनी गत निर्वाचनका बेला संघीय समाजवादीका कार्यकर्ता पारस काङमाङलाई गोली हानेको आरोपमा लामो समय फरार भए पनि दुई महिनाअघि पक्राउ परे। धरानमा हुने अधिकांश ठेक्का, निर्माण कार्यमा कमिसन उठाउने उनीसँग अहिले ५२ लाख पर्ने जापनिज गाडी र करिब ३० लाख रुपैयाँ पर्ने क्लासिक जिप छ। चुनावका बेला त्यही जिपमा एमालेको चुनाव चिह्न र झन्डा पेन्टिङ गरेर हिँडेका थिए। हाल एउटा डुबेको सहकारी हात पारेर अध्यक्ष बनेका उनी बजारमा मारवाडी व्यापारीसँग पैसा उठाएर सहकारी सञ्चालन गरिरहेका छन्।
एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघका सुनसरी जिल्ला सदस्य आविष्कार लिम्बू तीन महिनामा तीन पटक पक्राउ परिसकेका छन्। धरानको जिरो प्वाइन्टमा रहेको ओटू नामको बारमा लगानी गरेका उनी सो क्षेत्रमा रेस्टुरेन्टबाट पैसा उठाउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। दिवससँगै मिलेर धनकुटामा ठेकेदार अपहरण गर्दा ६० लाखको चेकसहित पक्राउ परेका उनलाई पनि एमालेले छुटाएपछि विजय जुलुस शैलीमा अबिर जात्रा गर्दै नगर परिक्रममा गराएको थियो। केही महिनाअघि सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर विजय हमालको पेस्तोल खोसेपछि पक्राउ परेका थिए। उनी लागुऔषध र झैझगडामा पटक– पटक जेल परेका छन्।
जवानी केले सेलाउँछ?
जानकी तारामी मगर लोकगायिकाका रूपमा चिनिन्छन्। अस्तिको तीजमा 'कार किनेर ल्याऊ' भन्ने गीत गाएर चर्चाको दायरा फराकिलो पारेकी उनले यस पटक भने अर्कै खालको गीत ल्याएकी छिन्। उमेरले जवानीकै स्वाद...
केटाको पक्षबाट केटी हेर्न गए। अचेल बिहे छिन्न जाँदाको लस्कर जन्तीको जत्रै हुन्छ। छोरीमान्छे र छोरामान्छे सराबरी देखिन्छन्। अझै कुरा गर्ने हो भने बिहेबारीका अन्तिम निर्णायक–शक्ति भनेकै वरपक्षका महिलाहरू हुन्।...
फेशनको स्वरूप दिनानुदिन बदलिँदै छ। 'जे सुहाउँछ, त्यही लगाउने' युवाहरूको फेशन स्टेटमेन्ट बन्दै गएको छ। अर्थात्, तपाईंलाई जुन पहिरन जस्तो म्याचिङसँग राम्रो लाग्छ, त्यही लगाउने। त्यही नै फेशन हो। र,...
अस्वस्थ देश, मौन दल
आमरण अनशन बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा माफियाका कारण देश, नागरिक र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(आईएमओ) को बिग्रिएको स्वास्थ्यको बढी चिन्ता छ। मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन लिन आईएमओमा गर्ने आर्थिक...
नजिकिँदो तीज पर्वले निकै व्यस्त बनाएको छ। विभिन्न संघसंस्था र दिदीबहिनीका आयोजनामा कार्यक्रम भइरहन्छन्। अहिले डिइसिसी नेपाल र राइज ग्लोबलका नाममा हामीले विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छौँ। वुमन्स क्रिएसन सेन्टरसँग मिलेर...